Ahoana no ahitanao ny fonon'ny hira tianao | Avy amin'ny Linux
Ahoana no ahitanao ny fonon'ny hira tianao indrindra
Indraindray isika dia mila mahazo haingana ilay mora fonony ny hira sasany, ho an'ireo tranga ireo dia noforonina izy io burhub tranonkala iray loharano misokatra izay mamela antsika hahita ny fonon'ny hira ao anatin'ny segondra vitsy.
Na dia maro aza ny fitaovana sy tranokala maro mamela antsika hanatanteraka an'io asa io, ity tranonkala ity dia manana ny mampiavaka azy. Luis Miguel Burdier izay mpamaky mahatoky ny bilaogy, ho fanampin'izany dia mamaky ny fonony ny spotify api Ka amin'ny ankapobeny dia hahazo ny kalitao avo indrindra isika.
Inona no atao hoe burhub?
burhub dia tranonkala open source, novolavolain'i Louis burdier mampiasa Python miaraka amin'ny rafitra flak, izay ahafahantsika mikaroka ireo fonon'ny rakikira mozika rehetra, haingana, mora ary mahazo fonony misy kalitao avo indrindra vokatr'izany.
Ity fitaovana tsara ity dia mahazo ny fampahalalana rehetra avy amin'ny tranomboky spotipy izay vakiany mivantana avy amin'ny Spotify API, hoy ny tranomboky manome antsika fahafaha-mitantana ny kaonty spotify, izay mitahiry ny mombamomba ireo hira ao anatin'izany ny fonony.
Rindrambaiko kely sy tsy manam-paharoa izay mety amin'ny mpitia mozika, izay manome vahaolana ho anay amin'ny olana tsotra ary mety misy fampiasana hafa maro. Tsara ny manamarika fa, satria loharano misokatra, ny fampiharana dia afaka mizana hahatratra tanjona hafa.
Raha fantatrao ny momba ny tetikasa hafa tokony hampahafantarina anao, aza misalasala mifandray aminay, izahay dia te ho feon'ny tsirairay amin'ireo mpamorona loharano misokatra sy mpandraharaha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ahoana no ahitanao ny fonon'ny hira tianao indrindra
triatra dia hoy izy:
Mieritreritra aho fa tsy nahita "flash" tokony hitenenana hoe "Flask" ianao hehe. Python dia manana ny rafitra Flask fa raha ny fahalalako azy dia tsy misy ny "flash" 😛
Mamaly ny triatra
tokoa, nahitsiny, misaotra betsaka noho ny hevitrao
Paositra: Ny safidy Sendgrid izay tokony hiezahan'ny tsirairay